အတည်ပြုပြီး: ဤသည် OnePlus 5T ၏ဒီဇိုင်းဖြစ်သည် Androidsis
OnePlus 5T ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည်
အ OnePlus 5T နှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလများ သူတို့ကနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းအရှိန်မြင့်တက်လာကြပြီ The ဖုန်းအသစ် တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည်ကောလာဟလများစွာတွင်သရုပ်ဆောင်နေသည်။ အသေးစိတ်မသိသေးသော်လည်းအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးပါ။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အကြောင်းပိုမိုပြောခဲ့သည် ကိရိယာထည့်သွင်းတော့မည့်ကင်မရာ, သို့သော်ယခုအချိန်အထိထုတ်ဖော်ပြောဆိုသောအနည်းငယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏တ ဦး တည်းဖြစ်၏။
များစွာသောမှတ်ချက်များရှိခဲ့သည် ဒီ OnePlus 5T ၏ထင်ဒီဇိုင်း။ လူအများကမူဤဗားရှင်းအသစ်သည်လောင်းကစားပွဲတစ်ခုအတွက်လောင်းမည်ဟုသွားသည် ဘောင်မပါဘဲမျက်နှာပြင်ပထမပုံရိပ်ယိုစိမ့်မှုကအတည်ပြုပုံရသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖုန်း၏ဒီဇိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။ OnePlus ဖုန်းအသစ်ကိုကြည့်ချင်ပါသလား။
ခဲ့တာ ဒီဇိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းကိုသိရှိနိုင်ခဲ့သူအီဗန်ဘေ့စ်အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် တရုတ်ကုမ္ပဏီကနေအသစ်က high-end သစ်၏။ သူ့ကိုမသိသောသူများအတွက်အီဗန်ဘေ့စ်သည်ထိုနေရာတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာများသောအားဖြင့်တာဝန်ရှိသည် ဖြန့်ချိသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကို filter ဒီဇိုင်း၏။ ဒါကြောင့်မီဒီယာအများအပြားအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုပါ။
အပေါ်ပုံမှာမြင်ရတဲ့ဒီပုံရိပ်ကြောင့်ငါတို့ကြားခဲ့ရတဲ့ကောလာဟလတွေမှန်ခဲ့ကွတယ်။ The OnePlus 5T သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်ထင်ရှားသည်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိနှစ်၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုလိုက်နာရန်ကတိပြုခဲ့သည်။ လောင်းကစား ခဲမဆို frames များကိုအတူမျက်နှာပြင်.
ထို့အပြင်၎င်းသည် ၂၀၁၇ ၏ကြယ်မျက်နှာပြင်အချိုးအစားကိုလည်းရရှိလိမ့်မည်။ OnePlus 5T တွင်အချိုး ၁၈: ၉ ရှိသည်, ဖန်သားပြင်မပါဘဲဘောင်နှင့်အတူဖုန်းများအတွက်ဘုံ။ ဒီမော်ဒယ်အသစ်ဟာငါတို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းငါတို့သိတယ် ၎င်း၏ယခင်ထက်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်။ ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီကဒီဇိုင်းသစ်ကိုလောင်းဖို့ကြိုးစားသည်။
ဒီ OnePlus ဖုန်းအသစ်ကိုသိရန်အနည်းငယ်သာကျန်တော့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်လိမ့်မယ် နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက် - တင်ဆက်မည့်နေ့စွဲ။ သုံးပတ်အတွင်းမှာပဲဒီ high-end range အသစ်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သံသယမရှိဘဲဒီ OnePlus 5T သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထုတ်လုပ်သည်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီတခုဖန်တီးနေသည့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဒီဖုန်းကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ။
OnePlus 5T ၏ထိပ်ဆုံးတစ် ၀ က် (2.5t? Ha) ။ pic.twitter.com/pmfhdQSgWQ
- အီဗန် Blass (@evleaks) အောက်တိုဘာလ 30, 2017
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » OnePlus 5T ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည်
Google သည် Pixel2ပြproblemsနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းပြီးအသုံးပြုသူများကိုဆုချလိမ့်မည်